Indha Cadde oo shaaca ka qaaday inuu difaacayo musharaxiinta mucaaradka | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Indha Cadde oo shaaca ka qaaday inuu difaacayo musharaxiinta mucaaradka
Indha Cadde oo shaaca ka qaaday inuu difaacayo musharaxiinta mucaaradka
General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha Cadde) oo wareysi siiyey Radio Kulmiye ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu difaaco Midowga Musharraxiinta, kadib markii isaga & saraakiil kale loo xil-saaray amnigooda.
Indha Cadde ayaa sheegay in iyada oo aan la magacaabin xittaa uu diyaar u ahaa ilaalinta amniga xunbnaha musharraxiinta oo si weyn uga soo horjeeda dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in go’aankan uusan u arkin wax qalad ah, islamarkaana horey sidan oo kaleba uu u difaacay Farmaajo, markii uu ahaa musharraxa.
“Iyadoo aan nala magacaabin inaan difaacno dadkaas musharaxiinta ah ayaa diyaar u nahay, sida shalay u difaacnay Farmaajo markuu musharaxa ahaa ayaa u diyaarsanahay inaan u difaacno Musharaxiinta.”ayuu yiri Generaal Yuusuf Indha Cadde.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha Soomaaliya uusan boobi karin doorashada, wuxuuna ugu baaqay inuu u turo dadkii shacabka ahaa ee shalay u soo banaan-baxay, markii loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo weli walaac xoogan iyo tabasho ay ka jirto doorashada 20/21, taas oo ay ku kala aragti duwan yihiin dowladda iyo mucaaradka.
Previous articleMusuqa Soomaaliya halkee ayuu gaarsiisan yahay?
Next articleKhasaaro culus oo ka dhashay Saldhig ciidanka Kenya leeyihiin oo la weeraray
XOG: Madaxweyne Farmaajo oo Xal u helay Axmed Madoobe, Gaas iyo Shariif oo Xaalka….
Dhageyso:-Ambasador Diinaari oo ka hadlay Fadeexda Yaabka leh ee ka taagan Shirka Brussels…
DAAWO WAR DEG DEG AH: Aduunka oo Dagaal Qarka u saaran, Ruushka, China, Iiraan iyo Mareykanka
Ciidamada Danab oo Al-Shabaab kala wareegay degmada Kurtunwaarey & Maxaabiis..
Sirtii Ka fakatay Kenya Ee Doorashada Soomaaliya & Murashax Ay Taageereyso
Xildhibaan Muslim ah oo Dacwad ka gudbiyay Macbad la sheegay in loogu gefay Diinta Islaamka
Xasan Sheekh Maxamuud oo Hal Arin kala hadlay Guddoonka Aqalka Saree ee Dalka
”Tuugo waddani ah!” – Siyaasi KASHIFAY halka ay siyaasiyiinta maamul-goboleedyadu geliyaan lacagaha ay lunsadaan!